अब धामीझाँक्रीलाई पनि भिसा चाहिने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब धामीझाँक्रीलाई पनि भिसा चाहिने !
हुम्ला, मानसरोवर-कैलाश तीर्थयात्रामा आउने धामीझाँक्रीलाई पनि चीनले भिसा अनिवार्य गरेको छ । वर्षौंदेखि यहाँका धामीझाँक्रीबिना रोकतोक मानसरोवर-कैलाश तीर्थयात्रामा जाने गरेका थिए । भिसाको व्यवस्था गरिए पनि हुम्लाका धामीझाँक्रीको एउटा टोली भर्खरै जिल्ला प्रशासनको सिफारिस लिएर मानसरोवर यात्रामा निस्किएको छ ।
नियममा कडाइपछि चिनियाँ सीमा ताक्लाकोटबाट आफूहरूलाई फिर्ता पठाइने हो कि भन्ने त्रास रहेको सर्केगाड गाउँपालिकाका धामी राजेन्द्र कार्कीले बताए । ‘पाँच दिन पैदल हिँडेर सिमकोट आई सीमा पास त बनाइयो,’ उनले भने, ‘ताक्लाकोटबाट जान पाइँदैन भनेर फिर्ता पठाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
उनका अनुसार अधिकांश धामी नयाँ नियम लगाइएपछि मानसरोवर जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा छन् । सिमकोट गाउँपालिका-२ की धामी तुली भण्डारीले वर्षौंदेखि बिनारोकतोक मानसरोवर जाँदै गरेकालाई सीमामा रोक लगाइन थालेपछि धेरै धामी तीर्थयात्राबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
सीमा प्रवेशको सिफारिस लिएर गएका धामीलाई साउन २७ सम्मको म्याद दिइएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । सीमा वार्ता नभएकाले उनीहरूलाई चीन सरकारले रोक लगाए पनि स्थानीय प्रशासनले जान सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
ट्याग्स: धामी झांक्री, मान सराेेवर